CT BESETROKA : « Fampanantenan’ny Filoha Rajoelina ny RN44 fa tsy an’ny Les As »
Valin-kafatra. « Fa angaha fampanantenana nataon’ny Filohan’ny Fahefana Avon’ny Tetezamita ka notanterahin’ny Les A.S. ny fanamboarana ny RN44, sa volam-panjakana no nanaovana azy ? » 26 octobre 2011
Hoy ny fanontanian’ny Ct Razafindrakoto Fidy Mamy Helison na i Besetroka, raha nihaona tamin’ny mpanao gazety mahakasika ny resabe momba ny lalam-pirenena faha-44 iny.
Velom-panontaniana avokoa ny vahoakan’ Alaotra nahita ny filohan’ny Les A.S nitondra ireo mpikambana marobe ao aminy nandritra ny fitsidihan’ny minisitry ny Asa vaventy tany amin’ny lalam-pirenena faha-44, ka nandeha tao amin’ny fahitalavi-panjakana ny sabotsy alina teo. « Volam-panjakana no nanaovana io lalam-pirenena faha-44 io, ary ny Filohan’ny Fahefana Avon’ny Tetezamita no nampanantena io tamin’ny vahoakan’ny faritra Alaotra Mangoro », hoy ity mpikambana amin’ny Filankevitry ny Tetezamita. Manana andraikitra amin’ny fanaraha-maso mikasika ny fizotry ny asa fanamboarana ao ny mpikambana amin’ny Filankevitra ambonin’ny Tetezamita avy aty Alaotra Mangoro, hoy ihany izy, ary manao an-tsakany sy an-davany izany asa nankinina tamin’izy ireo izany.
Nahazendana nahita ny filohan’ny Les A.S. nijery sy nikabary tamin’ny anaran’ny antokony niaraka tamin’ny minisitry ny Asa vaventy tao amin’io RN-44 io. Mpanara-maso ny asan’ny governemanta ihany koa ny mpikambana eny anivon’ny Filankevitry ny Tetezamita kanefa mbola tsy nantsoin’ny minisitry ny Asa vaventy hatramin’izay nitsidihany tao amin’io lalam-pirenena io izay ny Ct avy aty Ambatondrazaka. Naheno ary niatrika io fitsidihina tao io ny solontenam-panjakana taty an-toerana ary nandeha irery tany fa tsy nilaza na nampandre tamin’ iza na iza.
Efa misy sahady ny misoavaly ny asa ataon’ny Fitondrana amin’izao, hoy hatrany ity Ct avy aty Ambatondrazaka ity. Ny mahagaga dia misy mpikambana avy ao anivon’ny Kaongresin’ny tetezamita marobe avy aty Alaotra Mangoro kanefa olona tsy avy ao an-toerana akory no mandeha manara-maso sy misalovana andraikitra ary mankalaza tena ao amin’io RN-44 io. Mandeha ny asa dia miseho avokoa izao rehetra izao ary lasa mahafantatra ny aty Alaotra kanefa hatramin’izay dia tsy nisy nahita ny fahorian’ Ambatondrazaka. Mahavita ny asa tokony hataony ary tsy mitsabaka amin’ny anjara andraikitry ny hafa ny mpikambana eo anivon’ny Filankevitry ny Tetezamita aty Alaotra satria mahatratra inefatra farafahakeliny no mandeha ao amin’io RN44 io ao anatin’ny herinandro.
Leon’ny fampidirana ny fanamboarana io lalam-pirenena io amin’ny kabary politika tahaka izao ny vahoakan’ Alaotra.